Tato Japoney kely, kanto ary sarobidy | Ny fanaovana tatoazy
Tato Japoney kely, kanto ary sarobidy
ny tatoazy japoney ny kely dia afaka mahita aingam-panahy amin'ny motif maro samihafa amin'ity kolontsaina manankarena ity, samy manana ny tandindona aminy avy.
Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity momba tombokavatsa Japoney kely dia nanomana lisitra ho anao miaraka amina hevitra vitsivitsy izahay hahatonga ny tatoazy tsy manam-paharoa.
1 voninkazon'ny serizy
Ny felam-boninkazo dia iray amin'ireo aingam-panahy lehibe amin'ny tatoazy Japoney kely. Malemilemy sy mandalo (herinandro vitsivitsy monja isan-taona izy ireo) no tandindon'ny fianakavian'ny mpanjaka japoney ary iray amin'ireo endrika miverimberina matetika amin'ny tatoazy nentanin'ny kolontsain'ity firenena ity. Samy miaraka amin'ny lokony fotsy na mavokely ary miaraka amin'ny hakanton'ny mainty sy fotsy dia lavorary izy ireo.
Kanjis dia iray amin'ireo aingam-panahy kintana ho an'ity karazana tatoazy ity. Aza mijanona amin'ny anaranao fotsiny (ho fanampin'izany, ny katakana dia tsara kokoa ho an'ireo tranga ireo), manana kanjis an-jatony mifandraika amin'ny fotokevitra mahafinaritra toy ny hatsarana, ririnina na plum ianao. Na manandrana haiku aza raha mila mihoatra ny iray ianao, dia alao antoka fa voamarina tsara ny tsipelina azy.
Fantatra amin'ny asa-tanana kanto ny Japoney. Anisan'ny malaza indrindra ny Origami, ny kanto taratasy mivalona. Na dia crane aza no tena malaza dia misy karazana Origamière rehetra: elefanta, amboadia, voninkazo ... Atambatra amin'ny loko mainty sy fotsy tsotra na miaraka amina felatan-drano hanararaotra azy ireo.
Miaraka amin'ny biby fiompy dia tsy ny alikao Shotguns no tianao holazaina, fa ny fitiavan'ny Japoney hafa, izay manana biby fiompy amin'ny zava-drehetra: manomboka amin'ny Hello Kitty ka hatrany amin'ny hafa liana kokoa (hiantso azy ireo na ahoana na ahoana) toa an'i Jimmy Hatory, ilay ninja manana loha fimailo izay mampiroborobo soa aman-tsara firaisana ara-nofo any Japon, manana tontolo biby hafahafa (hafahafa) ianao.
Ny tatoazy Japoney kely dia mahafinaritra ary mety ho tena lamaody. Lazao aminay, manana tombokavatsa toa izao ve ianao? Aza hadino ny milaza aminay ny zavatra tadiavinao amin'ireo hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tato Japoney kely, kanto ary sarobidy
Tattoosin'ny foko kely, azo atao ve izany?